Iningi lenu lingacabanga ukuthi ucansi yisenzo socansi esiphakathi kwabantu ababili. Kodwa ingabe kunendaba ucansi lwendunu? Kuthiwani uma kuhileleke abantu abathathu kodwa oyedwa angangenwa? Nokushaya indlwabu?
Ucwaningo lwakamuva oluholwa u-Ava Horowitz, isazi sokusebenza kwengqondo kwezenhlalo e-University of Lincoln, saxoxa nabantu abasha abadala abangu-300 (18-30; isilinganiso esingu-20) ngalokho abakholelwa ukuthi ubulili. Bathole ukuthi kuyehluka ngokwezinga elithile ukuthi uqondile noma cha.
Kulolu cwaningo, izinhlobonhlobo zokuhlangenwe nakho kocansi zazibhalwe ephepheni. Abahlanganyeli bacelwe ukuthi basho eduze kokuhlangenwe nakho ngakunye uma bezokholwa ukuthi kumayelana nocansi uma kuwukuziphatha okusondelene kakhulu abaye babhekana nakho nabalingani babo. Lokhu kwakuhlanganisa ukuya ocansini (indunu nesitho sangasese sowesifazane), izenzo zobulili zendlela eyodwa (ukwenza ucansi ngomlomo noma ngesandla kumlingani), ukushaya indlwabu, nokushaya indlwabu (kuyikhompyutha noma ocingweni).
Nakuba abantu bazo zonke izinhlobo zezocansi bebebuka ucansi njengolumele kakhulu ucansi, amadoda athandana namanye athole amaphuzu aphezulu ngokukholelwa ukuthi ukungena kwendunu kuwucansi, uma kuqhathaniswa namadoda aqondile, abesifazane abaqondile, kanye nongqingili. Iqembu lakamuva lithole amaphuzu aphansi kakhulu, kodwa lilinganise izenzo zocansi ezingezona ezihambisanayo (ukudlala ingono, ukuqabulana okujulile, noma ukushaya indlwabu ngefoni ngesikhathi esisodwa) njengamathuba amaningi okubala njengocansi kunamadoda aqondile, abesifazane abaqondile, noma amadoda ayizitabane.
Pho yini ebalwa njengocansi? Impendulo incike ngokwengxenye ekuthandeni kwakho ubulili. Ubunjalo bezinto ozikhangayo zocansi nezothando yizo ezizonquma ukuthi yini oyicabangayo ngocansi.
Ababhali balolu cwaningo abazange baqagule ngemiphumela yalokho okuhlanganisa ukudlwengula. Kodwa uma ukukhetha ocansini kusiza ekulolongeni lokho okubhekwa njengokudlwengula, kusho ukuthi kudala izinkinga ezinkulu kulokho okufanele kuthathwe njengokudlwengula ngokomthetho. Nakuba kubonakala kungenakwenzeka ukuba nemithetho eyahlukene yabantu abahlukene, kuyabonakala ukwandisa imithetho ukuze ihlanganise izenzo zocansi amaqembu amaningi abantu abangazicabangela ucansi. Ngakho-ke, mhlawumbe izinto ezifana nokuxhumana kocansi okungafunwa, lo msebenzi othola ukuthi ongqingili abangabubheka njengocansi lwangempela kaningi kunamanye amaqembu, kufanele bafakwe encazelweni yocansi. Ukukhawulela ukudlwengula ekungeneni ngokocansi kushiya isikhala esiningi salokho abanye abantu abangakubheka njengokungafakwa ezincazelweni zokudlwengula.